အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူများနှင့်ဥက္ကဌ Soyer ခြေနင်းများ - RayHaber
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirအဆိုပါ Soyer နင်းအမြင်အာရုံချို့ယွင်းပြည်သူ့ဥက္ကဋ္ဌ Translate
သမ္မတ၏ soyer သည်နှင့်အညီမသန်စွမ်းက pedals လှည့်
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, Izmir အတွက်မသန်စွမ်းအခွင့်အရေးများ၏လယ်ပြင်တွင်လှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်သောဥရောပ Mobility ကိုအပတ်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့မည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒကကူညီပံ့ပိုးရန်သူ Espedalen အစည်းအရုံးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွဲဖက် (တွဲဖက်) ရန် "ခင်မင်မှု၏လမ်း" ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမသန်စွမ်းနှင့်မပါဘဲ Espedalen အစည်းအရုံး "ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်" တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရပ်စည်းရုံး။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Tunç Soyer နှင့် Espedalen ဥက္ကဋ္ဌ Saldirai Çankayaအဆိုပါİzmir Konak ရင်ပြင်သမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင်နှင့်အတူနှစ်ဆနင်းစက်ဘီးမှတက်ခဲ့သည်။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တူရကီမှသတင်းထုတ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးယူနစ်ဌာနမှူးမာရီယာ Kanellopoulo ကိုလည်းစက်ဘီးချီတက်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Espedalen ဥက္ကဋ္ဌ Saldirai Çankaya, Espedalen ကျေးဇူးတင်Tunç Soyer မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီ pedalla တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ဟန့်တားအတူတကွကျော်လွန်အကွာအဝေးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ Çankayaနှင့်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ရပ်, "တွဲဖက်" လူနှစ်ဦးကဤစက်ဘီးမသန်စွမ်းညှိနှိုင်းအတွက်စက်ဘီးများအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ကိုပြောသည်စီးနင်း၏စိတ်ကူးကနေပျေါပေါ။ Çankaya, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကျနော်တို့စုစည်းအတွင်းမြို့အတွင်းတည်ရှိသောတွဲဖက်စက်ဘီးနှင့်ခရီးဝေးခရီးစဉ်အပေါ်အတူတကွဆောင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘေးဥပဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာရုံချို့ယွင်းစက်ဘီးစီးသူမှစက်ဘီးစီးခြင်းစွမ်းရည်နှင့်တာဝန်မြင့်သော။ ကျနော်တို့အတူတူဖျော်ဖြေသဘောသဘာဝစခန်းခရီးစဉ်ကြုံနေရပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Soyer ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတသူ့ကိုယ်သူအလွန်ပျော်ရွှင်ဖော်ပြထား "တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်ရပ်စည်းရုံးလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
IMM ပံ့ပိုးမှု 500 42 ကီလိုမီတာစက်ဘီးစီးနင်းနှင့်အတူ Translate! 23 / 09 / 2018 အဆိုပါ IMM Sarachane ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် "ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်" 500 42 အသစ်တစ်ခုကိုလေဆိပ်နင်းလှည့်အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌ကီလိုမီတာ cyclists ။ ကမ္ဘာ့အမျိုးမျိုးသောမြို့, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏ 16-22 စက်တင်ဘာလဥရောပ Mobility ကိုအပတ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ "မျိုးစုံနှင့် Continue" ဟုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအထူးအဖွဲ့အစည်းကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး၏ဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်ကျင်းပဖြစ်ရပ်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့ သွား. teknofest လေကြောင်း, အာကာသနှင့်နည်းပညာပွဲတော်များ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန 500 စက်ဘီးစီး။ အစ္စတန်ဘူလ်န်းကျင်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်စက်ဘီးစီးနိူး၏ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်နယ်များသို့တက်ရောက်ကြသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်စက်ဘီးအသင်း IMM White ကစားပွဲတင်န်ထမ်း ...
Kayseri အိုလံပစ်အချက်များအတွက်မာစတာ Translate ကြ၏စက်ဘီးစီးနင်း 12 / 09 / 2019 အဆိုပါဂိမ်းများမှထောက်ပြသောနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ Kayseri ကျင်းပခဲ့သည်သောတိုကျိုအိုလံပစ် 2020 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ။ အဖွဲ့အစည်း 10 90 430 ကီလိုမီတာခြေနင်းအတွက်တိုင်းပြည်အနှံ့သုံးရက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားလှည့်။ တူရကီအားကစားသမားဒီပြိုင်ပွဲအပေါ်အမှတ်အသားကိုနှိပ်ပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးပြည်ထောင်စု UCI (ပြည်ထောင်စုစက်ဘီးစီးသူ Internationale) နှင့်တူရကီစက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ်, Kayseri ဝန်, Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Erciyes Inc ကို, Velo Erciyes ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှုန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ, devel မြူနီစီပယ်, Ramada Resort ကို Erciyes, Tekden ဆေးရုံ, ပြည်နယ်ကနျြးမာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအများပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူနေဖြင့် နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဗဟို Anatolia Erciyes နှင့်လမ်းစက်ဘီးပြိုင်ပွဲ၏ Grand Prix Velo ခရီးစဉ်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ ...
အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနိုင်ငံသားများ, လမ်းကို manual ASTI နှင့် Ankaray လိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 20 / 07 / 2012 အဆိုပါမြူနီစီပယ်မြင်မြို့တော်မသန်စွမ်းနှင့် ASTI Ankaray လိုင်းမှလမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်နှင့်အတူနိုင်ငံသားများမှအဆင်ပြေပေးနိုင်ရန်အတွက်ပြုလေ၏။ အဆိုပါ guideway နှင့်အတူ ASTI နှင့် Ankaray လိုင်းကပိုပြီးအလွယ်တကူထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်ဖို့မသန်စွမ်းကျေးဇူးတင်စကားအပေါ်သူတို့ရဲ့နည်းလမ်းရှာလမ်းလျှောက်စေသည်။ ဖြောင့်လိုင်းများပါလိမ့်မယ်လမ်းမပေါ်တွင်ဖြောင့် Continue, အစက်လှေကားတက်ဦးဆောင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ညဥ့်အချိန်ကိုပြန်လုပ်ဆောင်နေရည်ရွယ်ဖို့အတွက် walkway ၏လုပျငနျးကိုဝင်ရောက်ဖို့အမြင်အာရုံချို့ယွင်းဖွဲ့စည်းမည့်လုံခြုံသောနေရာတွင်သွားပါ။ ထို့အပြင်ကမြို့ဘတ်စ်ကားမှအရိပ်လက္ခဏာမသန်စွမ်းလူဦးရှာတွေ့ဖို့အစီအစဉ်၏လမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးကယ်ဆယ်ရေးပါပဲ။ ဘေးကင်းလုံခြုံလှုပ်ရှားမှုထိတွေ့နိုင်သောအလုပ်မျက်နှာပြင်၏လမ်းများအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ရည်ရွယ်သည်။ အများပြည်သူသုံးပွင့်လင်းဒေသများရှိဘေးအန္တရာယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုံရိပ်ယောင်နှင့်အသံထှကျသတိပေးချက်ကြားနာချို့ယွင်းမျက်နှာပြင်ကယ်ဆယ်ရေးမြေပုံ handrail စနစ်များကိုကြားနာချို့ယွင်းခေါ်ဆိုခ bouillon ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ပါလိမ့်မည်များအတွက် 18 / 06 / 2013 မသန်စွမ်းလူများအတွက်ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်ကယ်ဆယ်ရေးမြေပုံ handrail သတိပေးဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးအသိဉာဏ်ကြားနာချို့ယွင်းခေါ်ဆိုခစနစ်များ IZMIR IZMIR Metro CITY BEL.METRO ခကြောင်းİŞL.TAŞ.İNŞ.S bouillon ။ ကိုမြင်လျှင်နှင့်ကြားနာ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်များ, ကယ်ဆယ်ရေးမြေပုံ FOR ချို့ယွင်းဗွီးကြား, handrail အချက်ပေးခလုတ်ပိတ်ပင်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးကြားနာစနစ်များကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်အလုပ်မှာဧည့်ခံ 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 73096 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: လမ်းပေါ်မှ 2844535110 MERSİN Bornova / IZMIR ...
ကြိုးစားနေစဉ်မြေအောက်ရထားစီးကားများအကြားကျဆင်းသွားအမြင်အာရုံချို့ယွင်းနိုင်ငံသားများ 15 / 09 / 2014 အဆိုပါကားများအကြားကျဆင်းသွားဖို့ကြိုးစားနေစဉ်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနိုင်ငံသားများမြေအောက်ရထားကို ယူ. , Bursa အတွက်မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်, သင်မြေအောက်ရထားစီးချင်တဲ့အခါအလျင်ပြေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သက်ရောက်မှုများကနှစ်ခုကားများအကြားကျဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကိုလည်းဘူတာရုံမှာလုံခြုံရေးကင်မရာများတွင်ထင်ဟပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များ, Burulaşအတွက် BursaRay Şehreküstüဘူတာ site ကိုအမှုဆောင်မွန်းတည့်အချိန်၌ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်ဦးမသန်စွမ်းခရီးသည်ရဲ့နာမညျကိုတွေ့မြင်öğrenilemeyenသူ UU ဦးတည်ချက်မှရထားအဘို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ရထားကားများကြွလာဆီသို့ညွှန်ကြားထားသောရူပါရုံကိုအလငျြတဟုန်တည်းပြေးသူမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများတဦးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်မှုနှစ်ခုကားများ၏သက်ရောက်မှုကိုမြင်လျှင်မသန်စွမ်းလူငယ်များအကြားကွာဟချက်သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သတိထားတဲ့သူများမှာ ...
IMM ပံ့ပိုးမှု 500 42 ကီလိုမီတာစက်ဘီးစီးနင်းနှင့်အတူ Translate!
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုံရိပ်ယောင်နှင့်အသံထှကျသတိပေးချက်ကြားနာချို့ယွင်းမျက်နှာပြင်ကယ်ဆယ်ရေးမြေပုံ handrail စနစ်များကိုကြားနာချို့ယွင်းခေါ်ဆိုခ bouillon ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ပါလိမ့်မည်များအတွက်